Factory Tour - Ningbo Sunshine fingotra Ary Plastic
W ith ny tanjon'ny " mifaninana amin'ny kalitao tsara sy hanana amin'ny famoronana " sy ny fanompoana fitsipiky ny " maka mpanjifa 'fitadiavana toy ny fironana ", isika dia mafy mahafeno fepetra manome vokatra sy ny asa fanompoana tsara an-toerana sy iraisam-pirenena ho an'ny mpanjifa.
" Create Values, manompo Customer !" dia mikatsaka ny tanjona isika. Manantena izahay fa hanorina ny mpanjifa rehetra mandritra ny fotoana maharitra, ary mifanohitra izy mahasoa fiaraha-miasa amin'ny us.If tianao ny hahazo ny tsipiriany bebe kokoa momba ny orinasa, Mba andefaso olona aminay izao!
T dia miasa traikefa tany an-tsaha no nanampy anay taty mahery ny fifandraisana amin'ny mpanjifa sy ny mpiara-miasa na amin'ny an-toerana sy iraisam-pirenena tsena. Nandritra ny taona maro, ny vokatra efa naondrana any amin'ny firenena mihoatra ny 15 eto amin'izao tontolo izao, ary efa be mpampiasa ny mpanjifa.
Noho ny teknolojia ho toy ny fototra, hampitombo sy hamokatra avo-tsara entana araka ny isan-karazany ilain'ny an-tsena. Amin'ny foto-kevitra izany, ny orinasa dia mbola hanana vokatra avo foana koa soatoavina sy hanatsara ny vokatra, ary dia hanome mpanjifa maro ny tsara indrindra amin'ny vokatra sy ny tolotra!
Dia nandray ny fototra hevitry ny hoe " mba ho tompon'andraikitra ". Dia hiova ho amin'ny fiaraha-monina ho an'ny vokatra avo lenta sy tsara asa fanompoana. Fandraisana andraikitra isika mba handray anjara amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena mba ho kilasy voalohany mpanamboatra ity vokatra eto amin'izao tontolo izao.
C ertainly, mifaninana vidiny, mety fonosana sy ny lahateny ara-potoana dia ho antoka toy ny isan-mpanjifa fitakian'ny. Manantena izahay ny hanorina fifandraisana raharaham-barotra miaraka aminao eo amin'ny fototry ny fifanampiana soa sy tena mahasoa ao amin'ny hoavy tsy ho ela. Mandray amim-pitiavana mba hifandray antsika sy ho tonga ny cooperators mivantana.
W f efa mihoatra ny 10 taona naondrana traikefa sy ny vokatra no expored mihoatra ny 30 firenena manerana ny teny. Foana isika hihazona ny fanompoana-pinoany Client aloha, Quality voalohany ao an-tsaintsika, ary hentitra amin'ny kalitao ny vokatra. Tongasoa ny mitsidika!
P roducts no naondrana tany Asia, Mid-atsinanana, tsena eoropeanina sy Alemaina. Efa foana ny orinasa afaka hanavao ny vokatra fampisehoana sy ny fiarovana hitsena ny tsena sy hiezaka ny ho ambony miovaova A amin'ny toetra sy ny asa fanompoana vokatry ny fo. Raha manana ny voninahitra hanao raharaham-barotra miaraka amin'ny orinasa. dia antoka hanao ny tsara indrindra vitako mba hanohanana ny raharaham-barotra ao Shina.
" Tsara toetra, tsara fanompoana " foana ny pinoany sy ny Izaho mino. Mitondra ny ezaka rehetra mba hifehezana ny toetra, fonosana, iantsoan'i sns ary ny QC dia jereo ny tsipiriany rehetra nandritra ny famokarana sy eo anatrehan'ny sambo. Isika vonona ny hanorina fifandraisana lava raharaham-barotra amin'ireo izay mitady ny vokatra avo lenta sy tsara asa fanompoana. Efa nanangana ny varotra malalaka tambajotra manerana firenena Eoropeana, North of America, South of America, Moyen-Orient, Afrika, Azia Atsinanana countries.Please mifandray aminay, dia ho hitanao ny asa sy ny traikefa avo lenta naoty no mandray anjara amin'ny raharaham-barotra ny.
H onest ny mpanjifa rehetra dia ny nangataka! Kilasy voalohany-manompo, tsara toetra, tsara indrindra sy haingana indrindra vidiny daty fanaterana no tombony! Omeo mpanjifa rehetra manompo tsara no pinoany! Izany no mahatonga ny orinasa mahazo ny fitia ny mpanjifa sy ny fanohanana! Mandray manerana izao tontolo izao handefa antsika mpanjifa fanadihadiana ary miandry ny fiaraha-miasa tsara! Azafady ny nanontany ny antsipirihany bebe kokoa na fangatahana mpivarotra ao amin'ny faritra voafantina.
O Ora orinasa lehibe indrindra ireo vokatra be mpampiasa manerana izao tontolo izao; 80% ny vokatra naondrana tany Etazonia, Japana, Eoropa sy ny tsena. Zavatra amin-kitsimpo rehetra tonga soa vahiny tonga nitsidika ny orinasa.